HUAWEI Y9, FHD+ FullView Display, large battery phone | HUAWEI Myanmar
၆.၅ လက်မအရွယ် FullView Display1 နဲ့ ပိုပြီးကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်
2340 x 1080 ရှိ Resolution ရဲ့ ကြည်လင်တောက်ပမှု နဲ့ တိကျတဲ့အရောင်တွေအပြင် 19.5:9
ရှိတဲ့မျက်နှာပြင်အချိုးအစားကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ခုထဲစီးမြောနေသလို ခံစားရမှာပါ။
2340 x 1080 ရှိ Resolution ရဲ့ ကြည်လင်တောက်ပမှု နဲ့ တိကျတဲ့အရောင်တွေအပြင် 19.5:9 ရှိတဲ့မျက်နှာပြင်အချိုးအစားကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ခုထဲစီးမြောနေသလို ခံစားရမှာပါ။
လက်ထဲမှာမြဲမြံစေဖို့ 3D arc ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားပြီး Nano stripe နည်းပညာကြောင့် လှပသေသပ်တဲ့ ရောင်ပြန်အလင်းရောင်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားပြီး ထူးခြားတဲ့အရောင်တွေဖြစ်တဲ့ Midnight Black, Sapphire Blue, Aurora Purple တို့ကြောင့် ထင်ရှားတောက်ပစေဦးမှာပါ။
ရိုက်သမျှပုံတိုင်း သေသပ်စေမယ့် AI ကင်မရာလေးခု
16 MP +2MP ရှိတဲ့ ရှေ့ကင်မရာ၊ 13MP + 2MP ရှိတဲ့ ကျောဖက်ကင်မရာ2 တို့က တိကျတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ သေသပ်လှပမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ AI နည်းပညာရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်လည်း အရာဝတ္ထု ၂၂ မျိုးရဲ့ မတူညီတဲ့ပုံစံ ၅၀၀ ကျော်ကို သိရှိနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ချိန်ညှိပေးမှာပါ။3
f/2.0 ရှိ 16 MP ရှေ့ဖက်ကင်မရာက အလင်းရောင်နည်းပါးချိန်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် တောက်ပလွန်းတဲ့အလင်းရောင်နောက်ခံထားချိန်တွေမှာတောင် အလှဆုံး Selfie တွေကို ရရှိစေမှာပါ။ AI နည်းပညာရဲ့ အထောက်အပံ့တွေကြောင့် Portriat ရိုက်မယ်ဆိုရင် Soft Lighting, Stage Lighting, Butterfly Lighting နဲ့ တခြားနည်းပညာတွေပါဝင်တဲ့ 3D Lighting Effects* ကို ရရှိစေပြီး စတူဒီယိုမှာရိုက်သလို အကောင်းဆုံးကွာလတီကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
*Need HOTA upgrade
f/1.8 နဲ့ ကျောဖက်ကင်မရာက Low-light ဓာတ်ပုံတွေအတွက် ၅၀% အလင်းရောင်ပိုမိုဖမ်းယူနိုင်သလို AI Stabilization ကြောင့် Hand-held Night Mode ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ၆ စက္ကန့်ထိ Long exposure သုံးနိုင်တာကြောင့် အလင်းရောင်နည်းပါးတဲ့အခြေအနေမှာတောင် တိကျပြီး Noise နည်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရင်ကထက်စာရင် Kirin 710 Octa-core chip က Single-core စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၇၅% နဲ့ Multi-core စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၆၈% ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ 12 nm process နည်းပညာကြောင့်လည်း Chipset ရဲ့ ပါဝါစားမှုကို ၃၀% လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး GPU Turbo ဆိုတဲ့ နည်းပညာကြောင့်လည်း ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာ အထူးကောင်းမွန်စေဦးမှာပါ။ ဒီနည်းပညာကြောင့် GPU ကို နှစ်ဆ သက်သာစေသလို GPU စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ၁.၃ ဆအထိ တိုးတက်လာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဂိမ်းဆော့ရတဲ့ အတွေကအကြုံက အရင်ကထက် အဆပေါင်းများစွာ ကောင်းမွန်စေမှာပါ။
4000 mAh4 ကြောင့် စိတ်ပူစရာမလိုပဲ အားရပါးရသုံးနိုင်ပါတယ်။ Smart power consumption ရဲ့ ချိန်ညှိမှုကြောင့်လည်း သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေက ပိုပြီးကြာရှည်ခံစေမှာပါ။ ဒီဘက်ထရီပမာဏနဲ့ ဒီလိုချိန်ညှိမှုတွေကြောင့်လည်း ၉ နာရီဆက်တိုက် ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ် ဂိမ်းဆော့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၆၅ နာရီဆက်တိုက် သီချင်းနားထောင်နိုင်တာ၊ ၁၄ နာရီဆက်တိုက် 4G network5 နဲ့ အင်တာနက်သုံးတာတို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
TÜV Rheinland မှ ထောက်ခံချက်ရရှိထားတဲ့ မျက်စိသက်သာစေမှု
Eye comfort mode ကို TÜV Rheinland မှ ထောက်ခံထားတာဖြစ်ပြီး မျက်လုံးသာသက်စေမယ့် မြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Mode က မျက်လုံးထိခိုက်စေမယ့် အပြာရောင်ကြိမ်နှုန်းနဲ့ အပြာရောင်အလင်းတွေကို စစ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် အလင်းရောင်နည်းနေတဲ့ချိန်မှာ ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်ဦးမှာပါ။
Histen5.0 က အသံပိုင်းမှာ အထူးကောင်းမွန်စေပြီး Bass ကြိမ်နှုန်းတွေကို တိုးမြင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သီချင်းတွေထဲမှာ စီးမြောခံစားနိုင်ဖို့ နားကြပ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးဦးမှာပါ။ Party Mode နဲ့ သီချင်းတွေအတူတူဖွင့်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာတွေ ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။
Talkeasy AI conversation က "Automatic Enhancement" နဲ့ "NICAM နည်းပညာ" တို့သုံးပြီး အသုံးပြုသူရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး ကြည်လင်တဲ့အသံဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။ Noise levels အလိုက်အကောင်းဆုံးချိန်ညှိပေးတာကြောင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေက အဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာပါ
Quality ပိုင်းအတွက် အထူးစစ်ဆေးထားခြင်း
1.Full View display refers to standard display style with narrow bezel widths and high screen-to-body ratio. 2.Front main camera pixels 16 MP, secondary camera pixels2MP; Rear main camera pixels 13 MP, secondary camera pixels2MP. 3.Only the rear cameras can recognise 22 category labels and more than 500 scene types. 4.Typical Value. 5.Data from HUAWEI laboratories, data may vary according to network, screen brightness, sound volume or any other conditions.